SPM News: Somali 6.2.22
Published June 2, 2022 at 6:04 PM CDT
COVID-19 wuu soo laabanayaa. Xanuun daran oo ka dhashay Iowa iyo South Dakota. Cusbataalka bukaannada COVID-19 ayaa kor u kacay usbuucii la soo dhaafay, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Waaxda Caafimaadka South Dakota Arbacadii.
Konton iyo laba sariirood oo cisbitaal ah waxaa jiifay bukaan laga helay cudurka 'coronavirus'. Taasi waa koror 73% ah todobaadkii hore. Lix ayaa helayay daryeel degdeg ah. Dhimasho cusub lama soo sheegin.
Saraakiisha federaalku waxay soo sheegayaan in 180 Iowans ah la seexiyay COVID-19 ilaa maanta, tanina waxay calaamad u tahay koror usbuucii hore. Tirooyinkaasi waxay muujinayaan in cusbitaallada COVID-ku ay kordheen 41 marka loo eego usbuucii hore.
Saraakiisha gobolka ayaa soo sheegay in 44 boqol oo shaybaadho ah oo COVID-19 ah la xaqiijiyay todobadii maalmood ee la soo dhaafay. Taasi waa wax yar oo hoos u dhac ku yimid tirada baaritaannada togan ee la soo sheegay usbuucii hore.
Saraakiisha ayaa sidoo kale ku daray 15 Iowans dhimashadooda. In ka badan 62 boqolkiiba dhammaan dadka reer Iowan ayaa si buuxda looga tallaalay COVID-19.
Iowans iyo deganeyaasha kale ee Midwestern waxay wajihi karaan mugdi madow xagaagan haddii kulaylka aadka u daran iyo baahida kacsan ay la kulmaan koronto ku filan.
Digniinta ka soo baxday Waqooyiga Ameerika ee Isku-kalsoonaanta Korontada ayaa sheegaysa in Iowa iyo 14 gobol oo kale ay halis sare ugu jiraan "xaaladaha degdega ah ee tamarta inta lagu jiro xaaladaha xagaaga ee ugu sarreeya."
Leif Erikson wuxuu noqon doonaa kan ugu horreeya ee barkadaha magaalada si loo furo xilli ciyaareedka Sabtida. Saacaduhu waxay noqon doonaan 1 ilaa 6 galabnimo, todoba maalmood todobaadkii.
Xarunta Biyaha Biyaha ee Riverside taas oo, arrimaha dayactirka socda awgeed, ay ku qasbanaatay inay dib u riixdo taariikhdeeda furitaanka Juun 11, sida laga soo xigtay Beeraha iyo Madadaalada Magaalada Sioux. Riverside Aquatic Centre waxay furan tahay todobada maalmood ee usbuuca laga bilaabo 1-7 p.m. Barkadda dabaasha ee Lewis waxay sidoo kale furmi doontaa Juun 11 oo leh jadwal isku mid ah.